Waaqayyo karaa Kristos biyya lafa ofitti araarsuu jaalate. Ergaa araara kana immo nutti hadaraa kenne. Kakuun hadaraa nutti kenname kun bakkan akka ga’uuf waldoota, guurmoolee, akkasumas namoota dhunfa meshoolee dhimma baasan qopheesuuf dhaba dhabate dha.
Kaayoon keenya oduu gamachisa ykn misaracho fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela goofta keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Kanas bakkan ga’uf meeshaa sabquunamtii baratti dhimma ba’udhan barnoota, lallaba fi qooranna Maccafa Qulqulluu qophessuu fi dhiyeessuudhaan namoota gara amantiiti waamu, jireenya amantii Kristiyannatti jajabessuu, utuubu, abdi haaressu fi deemsa goofta walin mijjesuu fi gabbisuun ergama keenya.
Maxxansiin adda addaa kun akka isiin jaalalatti, ajjajamuuttii fi tajajila akka aarsaatti Waaqayyof akka dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyotti akka tajajiliitan isiin dadamaqsuuf akka ta’u ni
Kakuun kaayyoo isaa bakkan ga’uf barnoota guddinna fi ciiminaa jireenya hafuraaf ta’u kan sagalee Waaqayyo irratti hunda’ee qophesssa. Barnoota, lallaba, barrulee fi qoranno dirree kana irra jiru maxxansuun itti dhimma ba’uu ni dandeesuu.
Barnoota Barnoota adda addaa bifa gara garaattin qoophesinee akka itti dhimma ba’uun danda’amuuf maxxanisinaa
Barrulee Fuula kun yaadaa adda addaa kan illalicha amantii kristyinaa irratti hundame barrefame dhiyeessaa.
Lallaba Fuula kana irratti lallaba yeroo gara garaatti lallabamaan barrefaman dhiyeessina
Qoranno Fuuli kun qooranno Maccafa Qulqulluu kan abban fedhe maxxanise itti dhimma ba’uu danda’u qabata.
Dhag-Mullii Fuula kana irratti barnoota, lallaba, maree fi yaadaa gara garaa mesha barattin qindessine akka dhaggeeffachuu fi do’achuuf ta’utti ni dhiyeessina.